Semalt: Kutheni I-Web Scraping Inokuzonwabisa?
I-Web scraping inqubo ye-intanethi kubantu abafuna ukukhipha idatha ethile kwiiwebhusayithi ezininzi kwaye zigcinwe kwiifayile zazo. Ngokutsho kweHartley Brody (umbhali we-Ultimate Guide of Web Scraping), umqhubi wewebhu kunye nenkokeli ye-tech, ukukhwa kwewebhu kungaba ngamava anomnandi kwaye anenzuzo. U-Hartley Brody ulayishe iziqulatho ezahlukahlukeneyo kwiiwebhusayithi ezininzi, njengama-blog blogs kunye ne-Amazon.com. Ngamava akhe, waqonda ukuba nakweyiphi na iwebhsayithi inokutsalwa. Ezi zilandelayo zizathu eziphambili zokuba i-web scraping ingaba ngamava amanandi.
iiwebhusayithi zibhetele kunezi-API
Nangona ezininzi iiwebhusayithi zinama-API, zinemiqathango emininzi. Ukuba i-API inikezela ukufikelela kuzo zonke iinkcukacha, abaphandi bewebhu kufuneka bahambelane nemida yabo yokulinganisa. Iwebhsayithi iza kwenza utshintsho kwiwebhusayithi yazo, kodwa utshintsho olufanayo kwisakhiwo sedatha luya kubonakalisa kwiintsuku ze-API okanye kwiinyanga ezizayo. Kodwa abathengisi be-intanethi banokuzuza amaninzi kuma-API. Ngokomzekelo, njalo xa bengena kwisayithi (njenge-Twitter), iifom zokubhalisa zonke zifakwe kwi-API. Enyanisweni, i-API ichaza iindlela ezithile inkqubo yesofthiwe idibanisa nomnye.
Amashishini Awusebenzisi I-Lot Of Defenses
Ukusesha kwiWebhu kunokuzama ukukhangela isayithi elithile ngaphezu kweyodwa, ngaphandle kokuba neengxaki. Namhlanje amafestile amaninzi ayinayo inkqubo ekhuselekileyo yokukhusela isayithi labo ngokufikelela ngokuzenzekelayo..
Njani kwiSpey Scrape
Enye yezinto zokuqala ukusesha kwiwebhu ukulungiselela lonke ulwazi oluyidingayo ngendlela ethile. Yonke imisebenzi yenziwe ngekhowudi ebizwa ngokuba yi-'scraper', ethumela umbuzo kwikhasi elithile lewebhu. Emva koko, iphazamisa idokhumenti ye-HTML kwaye ifuna ulwazi oluthile.
iiWebhsayithi zinikela ukuThutyhulwa okuNgcono
Ukuhamba nge-API engakhethi kakuhle kunokuba yinkqubo enzima kakhulu kwaye kungathatha iiyure. Namhlanje iiwebhusayithi zinesakhiwo sokucoceka, kwaye ziyakucatshulwa lula.
Ukufumana iLayibrari yokuThengisa i-HTML efanelekileyo
UHartley Brody ugxile ekwenzeni uphando oluthile lokufumana ithala elifanelekileyo le-HTML ngolwimi olukhethiweyo. Ngokomzekelo, bangasebenzisa i-Python okanye i-Soup Beautiful. Ubonisa ukuba abathengisi be-intanethi abazama ukukhipha idatha ethile yokufuna ukuba bafumane ii-URL ukucela kunye nezinto ze-DOM. Emva koko iilayibrari zingazifumana zonke iinkcukacha ezinxulumene.
Zonke iiSayithi ziyakunqunyulwa
Abaninzi abathengisi bakholelwa ukuba ezinye iiwebhsayithi azikwazi ukutshitshiswa. Kodwa oku akunjalo. Enyanisweni, nayiphi na i-intanethi ingacatshulwa, ingakumbi xa isebenzisa i-AJAX ukuze ilayishe idatha, inokwenziwa ngokulula.
Ukuqokelela Iinkcukacha ezichanekileyo
Abasebenzisi bangakwazi ukufumana nokukhangela izinto ezininzi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Bayakwazi ukukopisha idatha eyahlukeneyo ukugqiba umsebenzi wabo ngokuhlala nje kwiikhompyutheni zabo.
Izinto eziphezulu zokuqwalasela kwi-Web Scraping
ezininzi iiwebhsayithi namhlanje azivumeli ukukhwa kwewebhu. Ngenxa yoko, abaphandi bewebhu kufuneka bafunde iMigomo neMibandela yesayithi elithile ukuze babone ukuba bavumelekile ukuba baqhubeke. Bamele baqonde ukuba amanye amaphepha ewebhu asetyenzisa isofthiwe esima ama-web scrapers. Kukho ezinye i-intanethi zichaza ngokucacileyo ukuba iindwendwe kufuneka zibeke ii cookies ukuba zibe nokufikelela.